राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी विजय धिमाल र विशाल तामाङल बालबालिकाहरुसंग रमाउदै !
Home∕समाचार∕राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी विजय धिमाल र विशाल तामाङल बालबालिकाहरुसंग रमाउदै !
२५ भाद्र २०७४, आईतवार १७:१२ September 10, 2017 koselihk 0
१० सेक्टेम्वर २०१७। उर्लावारी, मोरङ
उर्लाबारी–६ स्थित राधिका माविको मैदान । घाम ओराली लाग्दै गर्दा यहाँ थरी–थरीका रंगीचंगी पोशाक लगाएका बालबालिकाको भीडभाड निकै देखिन्छ । १०–१६ वर्षका बालबालिका बेग्लाबेग्लै समूह बनाएर अभ्यास गरिरहेका हुन्छन् । खासमा उनीहरू पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी विजय धिमाल र विशाल तामाङले सञ्चालनमा ल्याएको उर्लाबारी फूटबल ट्रेनिङ सेन्टरका खेलाडी हुन् ।
उर्लाबारी–६ का रमित थापा, ११, ले थुप्रैपटक सेन्टरमा विजय धिमाल र विशाल तामाङसँग बल पास गरेका छन् । उनको सपना छ, विजयजस्तै राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने । सुनगाभा आमाविमा कक्षा ६ मा पढ्ने थापाको जस्तै होबी दर्जी, आयुष मगरको सपना पनि भविष्यमा राष्ट्रिय टिमबाट खेलेर आफ्नो देशको नाम राख्नेछ । त्यसैले उनीहरू विद्यालय विधा भएलगत्तै फुटबलको जर्सी र बुट लगाएर नजिकैको राधिका खेल मैदानतर्फ दौडिन्छिन् । पछिल्लो एक महिनायता रमित, होबी र आयुषजस्तै आधा दर्जन बालिकाहरू पनि प्रत्येक साँझ मैदानमा पुग्ने गर्दछन् । मोरङ मोडलमा कक्षा ७ मा अध्ययनरत समिता राई, सुनगाभा आमावि कक्षा ६ मा अध्ययनरत इश्ना कोइराला, अमिशा लिम्बू, इलुस्मा राई भविष्यमा फूटबल स्टार बन्ने लक्ष्यका साथ प्रशिक्षणमा सहभागी भइरहेका छन् । अमिशालाई मनपर्ने खेलाडी स्पेनिस ला लिगा क्लब बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेसी हुन् । यसैगरी इश्नाको रोजाइमा पर्छन्, अर्को स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडका पोर्चुुगिज स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो । त्यसैले उनीहरू आफ्नो मनपर्ने खेलाडीको जर्सी लगाएर आउने गरेका छन् ।